"Mankanesa aty amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana."
Endrey izany teny fikasana mahatalanjona omen'i Jesôsy antsika! Iza amintsika rahateo moa no tsy mbola nahatsiaro ho mavesatra entana tamin'ny fotoana iray? Raha tsy noho ny amin'ny asa (izay mateti-pitranga tokoa), dia noho ny asa mafy sy ny enta-mavesatry ny fiainana. Eto i Jesôsy dia miteny amintsika fa fantany ny mahazo antsika, ary azony atao ny manampy antsika raha manaiky isika.
Rehefa avy milaza amintsika mba hitondra ny ziogany i Jesôsy, dia hoy Izy amintsika: "Fa mora ny ziogako, ary maivana ny entako"- Mat. 11:30. Raha lazaina amin'ny teny hafa izany dia izao: apetraho ny zioga sy ny enta-mavesatra entinareo (omeo Ahy izany), ka ny ziogako no ento, fa maivana izany.
Ahoana no hahafahantsika miaina ny fanandraman'ny fitsaharana resahin'i Jesôsy? Isika rahateo velona eto amin'ny tontolo izay nanambaran'Andriamanitra tamin'i Adama taorian'ny nanotany fa "ny fahatsembohan'ny tavanao no hahazoanao hanina"- Gen. 3:19. Fantatsika tsara, araka izany, ny hoe miasa mafy sy mitondra enta-mavesatra izay mila tsy ho zaka, indrindra amin'ny herin'ny tenantsika irery.
"Izaho no hanome anareo fitsaharana"
Vakio ny Mat. 11:20-28, raha nilaza i Jesôsy hoe: "Mankanesa aty amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana." Inona ny tontolon-kevitr'io fanambarana io? Fomba ahoana no anomezan'i Jesôsy antsika fitsaharana?
Nanana ny tontolon-keviny hatrany ny teny nambaran'i Jesôsy, tahaka ny antsika ihany. Mba hahatakarantsika izay lazainy dia ilaintsika ny mahatakatra ny tontolon-kevitra manodidina ny zavatra iray manokana ambarany, indrindra raha tsy tiantsika ny handray izany amin'ny heviny diso.
Manamarika kihon-dalana iray ao amin'ny filazantsaran'i Matio ny Mat. 11. Ny teny nataon'i Jesôsy izay manameloka ireo tanàna nanana ny maha-izy azy tao Galilia no fitenenana mafy indrindra tao amin'ny filazantsara. Tsy nitady sitraka Izy fa izay nilain'ny olona horenesina no nambarany; nisakaiza tamin'ireo "mpanota" Izy (Mat. 9:9-13); nanafintohina ireo mpitari-pivavahana ny fanambarany fa azony atao ny mamela heloka (Mat. 9:1-8).
Nanao teny mahery nanameloka ireo olona ireo tokoa i Jesôsy, nampitaha azy tamin'i Sodôma aza, izay toerana noheverina tamin'izany andro izany fa nisehoan'ny faharatsiam-panahy lehibe indrindra (tahaka ny amin'izao andro izao). "Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminao. "-Mat. 11:24.
Nihahenjana ny teny natao, kanefa tampoka teo, tao anatin'izany, dia niova ny lohahevitra noresahin'i Jesôsy, ka nanolotra fitsaharana ho an'ny olona Izy. Azony atao izany satria "natolotry ny Raiko Ahy; ary tsy misy mahalala tsara ny Zanaka, afa-tsy ny Ray"- Mat. 11:27. Ny maha-Andriamanitra Azy sy ny firaisany amin'ny Ray no hahafahany manome fitsaharana.
Ilaintsika ny mahatakatra fa tsy vitantsika ny mitondra irery ny enta-mavesatra, amin'izay vao hanatona isika ka hanala izany eo an-tsorotsika. Raha ny marina, ny ankamaroantsika dia tsy hanatona mihitsy raha tsy efa niaiky ny toerana misy azy marina. Miorina amin'izay ilaintsika ny fanasana ataon'i Jesôsy.
Filaza mandidy amin'ny teny grika no fiantombohan'ny teny nataony ao amin'ny Mat. 11:28. Tsy manome safidy ny hoe "mankanesa", izany no fepetran'ny fahitana fitsaharana. Ny hoe "mankanesa" dia midika fa mila manolotra ny fifehezana ny fiainantsika ho Azy isika. Amin'izao fotoana izay ahafahantsika mifehy zavatra maro eo amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ny finday izao, dia tsy mandeha ho azy ho antsika ny mankeo amin'i Jesôsy. Ny manome ny fifehezana ny fiainany ho an'Andriamanitra no ampahany sarotra indrindra eo amin'ny fiainana kristianina, ho an'ny ankamaroan'ny olona.
Tiantsika ny miresaka ny amin'izay rehetra ataon'Andriamanitra ho antsika ao amin'i Kristy sy ny tsy fahafahantsika mamonjy ny tenantsika sy ny hafa. Marina tokoa izany; kanefa amin'ny farany dia tsy maintsy manao safidy voahevitra tsara ny "hankeo" amin'i Jesôsy isika, izany hoe mametraka ny momba antsika eo Aminy. Amin'izay no hahatonga ny safidy malalaka ho ivon'ny fiainana kristianina.
Inona ny enta-mavesatra lanjainao? Ahoana no hianaranao mitondra izany eo amin'i Jesôsy sy miaina ny fitsaharana atolony, izay novidiny lafo ho antsika?
"Ento ny ziogako"
Vakio ny Mat. 11:29,30. Nahoana i Jesôsy no mibaiko antsika hitondra ny ziogany rehefa avy nanasa antsika hanome Azy ny enta-mavesatra entintsika mba hahitantsika fitsaharana?
Misy filaza mandidy roa hafa ao amin'ny Mat. 11:29 aorian'ny hoe "mankanesa" ao amin'ny and. 28. Ny hoe "ento" sy "mianara" dia mampifantoka ny sain'ny mpihaino (sy mpamaky) amin'i Jesôsy. Asaina mitondra ny ziogany sy mianatra Aminy isika.
Ohatra lehibe afaka manazava ny sarinteny momba ny zioga amin'ireo andalan-teny ireo ny fifandraisana ety misy eo amin'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka (efa voalaza ao amin'ny Mat. 11:25-27 izany). Miara-miasa hanavotra ny taranak'olombelona ny Ray sy ny Zanaka. Maneho fanoavana ny zioga (jereo ny Jer. 27), sarinteny maneho tanjona iraisana ihany koa anefa izany. Milefitra eo amin'ny ziogany isika ary manaiky ny asa izay omeny antsika mba hitahina ireo manodidina antsika. Tsy hoe milanja ny ziogany isika, fa miara-mitondra Aminy izany, satria "mora" ny ziogany ary "maivana" ny entany (Mat. 11:30).
Mamerina izany hevitra izany ny filaza mandidy faharoa hoe "mianara Amiko". Ny matoanteny "mianatra" amin'ny teny grika dia mifandraika amin'ny teny hoe "mpianatra". Tena mpianatr'i Jesôsy tokoa isika rehefa mianatra Aminy, ary ny fankatoavana sy ny fanoloran-tena dia toetran'ny mpianatra.
Inona ny maha-samy hafa ny hoe "mavesatra entana" (Mat. 11:28) sy mitondra ny ziogany (Mat. 11:29)?
Sarinteny fampiasa teo amin'ny fivavahana jodaisma ny zioga, hoenti-milaza ny lalàna. Mampiasa izany ny Asa. 15:10 hanondroana ny lalàn'ny famorana. Ny Gal. 5:1 indray dia mampifanohitra ny fahafahana atolotr'i Jesôsy amin'ny ziogan'ny fanandevozana izay manondro ny lalàna atao fitadiavam-pamonjena. Ny fiarahana mitondra ny ziogan'i Jesôsy dia manasongadina ny fankatoavana sy ny fanekena hanaraka ny diany sy handray anjara amin'ny iraka nanirahana Azy. Tsy haintsika ny hanampy na inona na inona amin'ny famonjena izay nataon'i Jesôsy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana, kanefa azontsika atao ny ho tonga ambasadaorony ka hizara ny vaovao mahafaly amin'ireo manodidina antsika. Miresaka ny lalàna ifotony kokoa mihoatra noho izay ataon'ny Fariseo ny fanazavan'i Jesôsy ny lalàna, araka izay naseho tamin'ny toriteny teo an-tendrombohitra (Mat. 5, 6, 7). Mitaky fiovam-po sy fiovan'ny fisainana izany, dia ho mora ny ziogany ary ho maivana ny entany (Mat. 11:30).
Teny fikasana mahafinaritra manao ahoana re izany! "Fitsaharana ho an'ny fanahinareo". Fomba ahoana ny niainanao izany fitsaharana izany? Nanao ahoana izany? Rehefa mifantoka amin'i Jesôsy sy izay atolony antsika isika, ahoana no manjary hahalalantsika izany fitsaharana izany?
"Fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po aho"
Toetra tsara tsy dia omen-danja loatra ny halemem-panahy amin'izao andro izao. Hihomehezana ny fanetren-tena. Nampianarin'ny tambajotran-tserasera antsika ny hifantoka amin'izay mafy feo, izay mitabataba, izay hafahafa sy mahery setra, ary izay madera. Maro tokoa amin'izay heverin'izao tontolo izao ho lafatra no mifanohitra tanteraka amin'izay manan-danja sy sarobidy eo imason'Andriamanitra.
"Ny fahalalana ny fahamarinana dia tsy miankina loatra amin'ny herin'ny saina fa amin'ny fahadiovan'ny fikasana, amin'ny fahatsoran'ny finoana miredareda sy miankina amin'Andriamanitra. Manatona akaiky an'ireo izay mitady ny fitarihan'Andriamanitra amin'ny fo feno fanetren-tena ny anjelin'Andriamanitra. Nomena ny Fanahy Masina hanokatra eo aminy ny haren-tsarobidin'ny fahamarinana."- HF, t. 40.
Vakio ny Mat. 5:5 sy ny 1 Pet. 3:4 ary ny Isa. 57:15. Ahoana no hamaritanao ny fahalemem-panahy sy ny fanetren-tena araka ireo andalan-tSoratra Masina ireo?
Miresaka ny "hamoram-panahy sy ny fandeferan'i Kristy" i Paoly ao amin'ny 2 Kôr. 10:1. Tsy fanoritsoritana ny olona mora araraotina, na ny olona misoroka ny fifandirana tsy akory ny fahelemem-panahy sy ny fanetren-tena. Tsy nitady fifandirana i Jesôsy, ary imbetsaka Izy no nisoroka izany satria tsy mbola tanteraka ny iraka nampanaovina Azy (Jao. 4:1-3). Rehefa tojo fihantsiana anefa Izy dia niteny tamim-pahasahiana saingy tamin-kalemem-panahy. Ny alahelony an'i Jerosalema, nialoha indrindra ny nanomboana Azy, ohatra, dia tsy fanozonana natao tamin'ny feo mafy fa sary an'ohatra narahin-dranomaso ny amin'ny hoavy izay hitondra faharavana (Lio. 19:41-44).
Matetika i Jesôsy no aseho tahaka an'i Mosesy faharoa ao amin'ny TV. Teo an-tendrombohitra Izy no niteny raha namelabelatra ireo fitsipiky ny Fanjakany (Mat. 5:1). Vahoaka marobe no nofahanany tamin'ny sakafo nanehoana fahagagana (Mat. 14:13-21). Ambaran'ny Nom. 12:3 fa "nalemy fanahy" i Mosesy, ary mifamaly amin'izany ny Mat. 11:29. Tamim-pahagagana no nanambaran'ireo olona nanatri-maso ny namahanana ny olona tsy omby dimy arivo, nanao hoe: "Ity tokoa no Ilay Mpaminany Izay ho tonga amin'izao tontolo izao."- Jao. 6:14 - mifandraika amin'ny Deo. 18:15 sy ny maha-mpaminany an'i Mosesy izany.
Mazava loatra fa mihoatra lavitra noho izay hita teo amin'i Mosesy ny fanetren-tena sy ny halemem-panahin'i Jesôsy; Izy rahateo no Ilay Mpanavotra antsika. Raha nanolo-tena hanavotra ny olony i Mosesy (Eks. 32:32), dia tsy ho nahatanteraka na inona na inona ny fahafatesany noho ny maha-mpanota azy sy ny filany Mpamonjy afaka mandoa ny onitry ny fahotany. Afaka misintona lesona avy amin'i Mosesy sy ny tantaram-piainany tokoa isika, saingy tsy mahita famonjena ao aminy.
Mila Mpamonjy izay afaka misolo voina antsika isika, tsy ho Mpanelanelana ihany fa ho Solontsika mihitsy. Zava-dehibe ny fanelanelanana, saingy ny fihantonan'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana nitondra ny otantsika, dia Ilay nanefa tamin'ny ainy ny famaizan'ny fahotana, no hany hahavonjy antsika amin'ny vokatra ateraky ny fahotana. Araka izany, na lehibe toy inona aza ny ohatra nasehon'i Jesôsy ho antsika dia ho zava-poana ihany izany raha tsy teo ny hazo fijaliana sy ny fitsanganany tamin'ny maty.
"Fa mora ny ziogako"
Efa nomarihintsika fa mifandraika amin'ny fampiasan'ny fivavahana jodaisma ny teny hoe "zioga" ny fampiasan'i Matio izany, ary koa mifandraika amin'ireo andalan-teny hafa ao amin'ny TV izay manondro ny fahatakaran'ny olona ny lalàna amin'ny heviny diso.
Azo adika ihany koa hoe "tsara, mahasoa, mahafinaritra" ny teny grika nadika hoe "mora" ao amin'ny Mat. 11:30. Maro ny olona mihevitra ny lalàn'Andriamanitra ho henjana, sarotra arahina ary tsy mifanaraka amin'ny zava-misy. Ahoana no hanampiantsika azy ireo hahita ny fahatsaran'ny lalàna sy haneho fitiavana Ilay Mpanome izany?
Tsaroan'ny ray aman-dreny mandrakariva ny fotoana voalohany nahaizan'ny zanany namindra. Ny famindra voalohany izay mbola mangohozohozo dia arahin'ny fanandramana mamindra fanindroany, avy eo fanintelony - ary raha mbola tohizana izany dia azo heverina fa ho tafintohina ilay zaza ka hianjera. Mety arahin-dranomaso izany, mety hisy mangana koa aza ny vatany, kanefa rehefa mahatsapa ny fahafahany mihetsika ilay zaza dia hitsangana ka hanandrana hamindra indray. Mamindra izy, mianjera ary mitsangana, dia toy izany hatrany. Miverimberina izany mandra-pahaizany mamindra tsara. Na dia tafintohina sy mianjera aza anefa, dia misy endrika kely falifaly no sady maneho amim-pandresena hoe: Dada, Neny, mahay mandeha aho!
Mety tsy ho mora mandrakariva ny miara-mandeha amin'i Jesôsy kanefa tsara hatrany, ary izany no tokony hatao. Mety ho tafintohina isika, mety hianjera mihitsy aza, kanefa afaka miarina ary manohy ny fiarahana mandeha Aminy.
Izao no nosoratan'i Paoly ao amin'ny Gal. 5:1: "Ho amin' ny fahafahana no nanafahan'i Kristy antsika: ka tomoera tsara, fa aza mety hohazonin'ny zioga fanandevozana intsony." Inona ny hevitr'izany?Ahoana no nanafahan'i Kristy antsika? Inona no maha-samy hafa ny zioga asainy entitsika sy ny "zioga fanandevozana" izay ampitandreman'i Paoly antsika?
Azontsika antoka fa na inona na inona tena tian'i Paoly hambara amin'ny "zioga fanandevozana", dia tsy miresaka ny amin'ny fankatoavana ny lalan'Andriamanitra (ny Didy folo) izy tsy akory. Ny mifanohitra amin'izany aza, amin'ny alalan'ny fankatoavana sy ny finoana ary ny fahatakarana fa azo antoka ny famonjena antsika noho ny fanaronan'ny fahamarinan'i Kristy antsika fa tsy noho ny lalàna , no hahazoantsika fitsarahana marina sy fahalalahana.
Ahitana fitsaharana kokoa ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra eo amin'ny fiainana noho ny fandikana izany, nahoana?
"Maivana ny entako"
Mampiasa ny sarinteny maneho ny fitondrana enta-mavesatra ny tenin'i Jesôsy mamarana ny Mat. 11:30: "Fa mora ny ziogako, ary maivana ny entako".
"Nahafaly an'i Mosesy ny fahitana an'i Jetro rafozandahiny rehefa avy niala tany Egipta sy namaky ny ranomasina izy. Vakio ny Eks. 18:13-22. Ahoana no nanampian'i Jetro an'i Mosesy hitondra ny enta-mavesany teo amin'ny fitarihana?
Ambaran'ny Eks. 18:13 amintsika fa nankeo amin'i Mosesy ny olona hitsara ny adiny, manomboka amin'ny maraina hatramin'ny hariva. Rehefa hitan'ny rafozandahiny izany dia niresaka tamin'ity vinantony ity izy mba hametraka lamina hahafahany mifantoka amin'izay zava-manan-danja, ary hamela ny olon-kafa handray an-tanana ireo raharaha madinidinika. Ambaran'ny Soratra Masina fa nihaino izay nolazain'i Jetro i Mosesy ka nanatanteraka izany fanovana mahasoa izany.
Rehefa nilaza tamintsika i Jesôsy fa maivana ny entany, dia niriny ny hampahatsiahy fa azontsika atao ny miantehitra Aminy, Ilay mpitondra ny enta-mavesatsika. Tahaka an'i Mosesy dia mila olon-kafa izay afaka miara-mitondra ny enta-mavesatra isika. Ny sarinteny nataon'i Paoly mikasika ny tenan'i Kristy ao amin'ny 1 Kôr. 12:12-26 dia maneho ohatra tsara momba ny fiaraha-mitondra enta-mavesatra. Mila vatana miasa tsara isika mba hahazakantsika ny vesatry ny zavatra iray. Ilaintsika ny tongotra, ny sandry, ny soroka, ny nofotra sy ireo hozabe mba hahafahana milanja entana.
Vakio ny Gal. 6:2. Manampy amin'ny fanatanterahana ny Kristy ny fiaraha-mitondra izay mahavesatra, amin'ny fomba ahoana?
Manampy antsika ny tontolon-kevitr'io andalan-teny iray io. Ambaran'i Paoly ao amin'ny Gal. 6:1, fa raha lavo amin'ny fakam-panahy ny rahalahy na anabavy iray dia tokony hanarina azy amim-pahalemem-panahy isika (tsarovy ny teny nataon'i Jesôsy ao amin'ny Mat. 11:29 fa malemy fanahy Izy). Ny hoe miara-mitondra izay mahavesatra dia midika ho famerenana ny olona iray nivily làlana ho amin'ny làlana tena izy mba hahitany ny fahasoavan'Andriamanitra. Midika ho fifanampiana raha sendra toe-java-tsarotra koa anefa izany. Ny teny grika ilazana ny "entana" dia manondro enta-mavesatra na vato. Fampahatsiahivana izany fa mitondra enta-mavesatra avokoa isika ka mila-ireo izay afaka manampy antsika hitondra izany. Asain'Andriamanitra mifampitondra izay mahavesatra ny fiangonana, asa izay atao amim-pahalemem-panahy sy fangorahana izany.
Eritrereto ny fotoana farany nanampian'ny olona iray anao hitondra izay mahavesatra. Nahoana izany no zava-dehibe tokoa taminao? Ny entan'iza no azonao iaraha-mitondra amin'izao?
"Rehefa hitanao fa mafy ny asanao, rehefa mitaraina noho ny fizahan-toetra sy ny toe-java-tarotra ianao, rehefa milaza ianao fa tsy manana hery hiatrehana ny fakam-panahy, rehefa tsy resinao ny tsy fananam-paharetana, ary fiakarana mideza no fahitanao ny fiainana maha-Kristianina, dia aoka ho fantatrao fa tsy ny ziogan'i Kristy no entinao amin'izany fa ny ziogan'ny tompo iray hafa."- CG, t. 267.
"Ilaina mandrakariva ny fiambenana sy fanoloran-tena feno fitiavana sy vokatry ny fo, kanefa miseho ho azy izany rehefa hazonin'ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana ny fanahy. Tsy misy na inona na inona azontsika atao mba hahazoana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy afaka mitoky amin'ny tenantsika isika na amin'ny asa tsara ataontsika; kanefa raha mankeo amin'i Kristy amin'ny maha-olom-bery sy mpanota antsika isika, dia hahita fitsaharana ao amin'ny fitiavany. Andriamanitra dia mandray izay rehetra manatona Azy ka mitoky tanteraka amin'ny fahamendrehan'llay Mpamonjy voahombo tamin'ny hazo fijaliana. Miboiboika avy ao am-po ny fitiavana. Mety tsy hientanentam-pifaliana isika, saingy mitoetra ao anatintsika ny fitokiana maharitra sy ny fiadanana. Ho maivana ny entana rehetra satria mora ny zioga ampitondrain'i Kristy. Manjary fifaliana ny manao ny adidy, ary fahafinaretana ny fahafoizan-tena. Ny lalana izay toa mikitroka dia tonga mazava noho ny amin'ilay Masoandron'ny fahamarinana. Izany no fandehanana amin'ny mazava tahaka an'i Kristy ao amin'ny mazava."- FW, tt. 38,39.
1. Tsaroanao ve ny fotoana nametrahanao ny fiainanao teo amin'i Jesôsy tamin'ny fiarahanao mandeha taminy? Zarao ao amin'ny kilasy izany ary asongadino manokana ny antony nametrahanao ny fiainanao teo Aminy.
2. Diniho ny vavaka nataon'i Jesôsy ao amin'ny Mat. 11:25-27 ary ifanakalozy hevitra ao amin'ny kilasy ny fomba hahazoantsika fahalalana mikasika ny fahasoavana. Nahoana Andriamanitra no manafina ny drafi-panavotana ("izany zavatra izany") tamin'ny hendry sy ny manan-tsaina kanefa manambara izany amin'ny zaza madinika?
3. Ahoana no hahafahantsika manampy ireo manodidina antsika izay milanja enta-mavesatra hankeo amin'i Jesôsy mba hahitany fitsaharana?
4. Saintsaino misimisy kokoa ny tenin'i Jesôsy hoe: "malemy fanahy sady tsy miavona am-po"- Mat. 11:29. Moa ve izany tsy hanimba ny fahatsapan'ny olona iray ny tombambidiny? Moa ve isika tsy tokony hahatsapa ho manana tombambidy, indrindra ho an'izay tsy matoky tena? Ahoana no hanampian'ny hazo fijaliana antsika hahatakatra izay tena tian'i Jesôsy hambara ao amin'io andalan-teny io? Ny halemem-panahy sy ny fo tsy misy avonavona ihany no tokony ho ao anatintsika rehefa mijoro eo am-pototry ny hazo fijaliana isika, nahoana?